memory stick မှာ၀င်တဲ့ virus - MYSTERY ZILLION
memory stick မှာ၀င်တဲ့ virus
အကိုတို့ရေ..ကျွန်တော့် memory stick မှာ notepad.exe ရယ်...!!!exe ဆိုတဲ့ဖိုင်တွေတွေ့ပါတယ်..ထုံးစံအတိုင်း format ကျွေးလိုက်တော့လည်း ကျွေးလို့မရတော့ဘူး ကူညီပေးကြပါအုံးဗျာ...:Oနောက်ပြီး desktop ပေါ်မှာ ရုရှားစာလိုလို..စပိန်စာလိုလိုနဲ့ mozillar icon တစ်ခုတွေ့ပါတယ်ဖျက်တော့လည်း restart လုပ်လိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်..ဖွင့်၀င်လိုက်ရင်www.yoxia.net ဆိုတဲ့ site ထဲတန်း၀င်သွားပါတယ်...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးအကြံဉာဏ်ပေးပါအုံး..နောင်တလက်စတည်း
စက်ထဲမှာ recycler ရယ်...systemvolume information ဆိုတာတွေလည်းတွေ့ပါတယ်..အဲဒီဖိုင်တွေက
ဘာတွေလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ..print screen ဖမ်းထားတဲ့ပုံတွေတော့ရှိပါတယ်:2:..ဘယ်လိုတင်ရမှန်းမသိလို့ပါ...ကူညီပေးပါခင်ဗျာ...:106:
Antivirus တစ်ခုခု နဲ့ Safe Mode ထဲမှာ Scan လုပ်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် Malwarebytes နဲ့ Scan ထပ်လုပ်ကြည့်ပါ။
Recycler နဲ့ Systemvolume Information တွေက System Folder တွေပါ။ ဖျက်လို့မရပါ။
!!!exe ဆိုရင် server061.exe ကနေ၀င်တာလားမသိဘူး အဲဒီကောင်ဆိုရင်တော့
msconfig>startup မှာ !!! လေးကိုအမှတ်ဖြုတ်။
regedit ထဲမှာ startup folder မှာ !!!exe ကို delete လုပ်
တစ်ကယ်လို့ kav ကို virus က မကိုက်သေးရင်တော့
update လုပ်ပြီး full scan စစ်
အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်က system volume information ထဲနှင့် recycler ဖိုဒါထဲမှာ ၀င်ပြီးပုန်းအောင်းနေပါတယ်။
ုုkav ကိုကိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ scan နှင့် update လုပ်လို့မရတော့ပါက
kav ဖိုင်များကို စနစ်တကျရှာဖွေ delete လုပ်ပြစ်နိုင်မှ kav ပြန်တင်လို့ရမှာပါ။
recycler ဆိုတာကတော့ delete လုပ်ရုံပဲလုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကို
မှတ်ထားပေးတဲ့ folder လို့ထင်ပါတယ်။ သူ့အထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ file တွေကိုပြန်ခေါ်လို့ရပါသေးတယ်။ အမှိုက်ပုံးလိုပဲပေါ့။
system volume information ဆိုတာကတော့ system restore ပြန်လုပ်လို့ရအောင်သိမ်းထားတဲ့
file တွေထည့်ထားတဲ့နေရာပေါ့။ အဲဒီ folder နှစ်ခု ထဲ၀င်ကြည့်ချင်ရင် explorerxp.exe software လေးနဲ့၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
msconfig>config မှာတော့တွေ့ပါတယ်..အကို...regedit ထဲက startup folder မှာတော့မတွေ့ပါဘူး
ကျွန်တော်သုံးတာက NOD32 ပါပုံမှန် update လုပ်ပါတယ်...version က 2.7 ပါ...နည်းနဲတော့နိမ့်မယ်ထင်တယ်..အရင်ကတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ...internet သုံးမဒီလိုဖြစ်သွားတာ...ဆက်ပြောပေးပါအုံးဗျာ...ကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်....ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်လည်း မေးချင်ပါတယ် စတစ် တစ်ခုက write protect ဖြစ်နေတယ် ဗိုင်းရပ်လား...
ဘာမှတော့လုပ်မိဘူး အဲ့တောကာ ဖောမက် ချလည်းမရ cmd နဲ့ ဖောမက်၀င်လုပ်လည်းမရဘူး ဇြစ်နေ
တယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိသူများပြောပေးပါဦး ခင်ဗျာ
recyclerဆိုရင်တော. ကျွန်တော်က command prompt ကနေပဲ ကစ်(သတ်)လို်က်တာပဲ ။ recycler ရှိတဲ.နေရာကိုသွား ....... နောက်ပြီး del RECYCLER ဆိုပြီးရောပဲ ။
regedit ထဲက startup folder မှာတော့မတွေ့ပါဘူး
msconfig မှာဖြုတ်ပြီးလို့ restart ချပြီးရင် msconfig ထဲပြန်၀င်ကြည့်ပါ !!!!!လေးကအမှတ်ပြန်မခြစ်သွားရင် ကိစ္စပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြောသလို antivirus လေးတစ်ခုခုနဲ့ full scan ပြန်စစ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါ။
အရင်ဆုံး အောက်ကဟာလေးကိုသုံးကြည့်ပါလား အစ်ကိုရေ
အဲဒါနဲ့မှမရရင် အဲဒီမှာတစ်ခုခြင်းဆွဲပြီးစမ်းကြည့်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်ကလင့်ခ်လေးနဲ့အဆင်ပြေဖူးပါတယ်။
ညီလည်းကြုံဖူးတော့ ပြောပြမယ်နော်။ စတစ်ကို format ရိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်ရင်ရှိနေတာ တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ စတစ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာကို အဲ့ဒီ ဗိုင်းရစ်က၀င်သွားပါဘီ။ အဲ့ဒီတော့ စတစ်ကို format ရိုက်လည်း ကွန်ပြူတာကတဆင့်ပြန်ကူးမှာဘဲလေ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာကတော့ ကွန်ပြူတာမှာရှိတဲ့ Recycler ကို unlocker နဲ့ အရင်ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ memory stick ကို format ရိုက်ပါ။ နက်၀ပ် ချိတ်ထားတယ် ဆိုရင် နက်၀ပ်ကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်။
အဲ့ဒီဗိုင်းရစ် ကဥပမာ ကွန်ပြူတာ 10 လုံးကနပ်၀ပ်ချိတ်ထားမယ် ဆိုပါစို့။ 9လုံးသတ်ပြီး လို့ တစ်လုံးကျန်ခဲ့ရင် မနက်ကျရင် ကွန်ပြူတာ 10 လုံး လုံးပြန်၀င်နေရောဗျ။ ဒီတော့တစ်လုံးမကျန် နက်၀ပ်ကြိုးဖြုတ်ပြီး unlocker software နဲ့ Recycler folder လေးကိုဖျက်လိုက်ပါ။ သူက partation တိုင်းမှာ၀င်တယ်ဗျ။ Show hidden files and folder ကိုအမှန်ချစ်လေး ပေးဖို့လိုတယ်နော်။ ညီတုန်းကလည်း အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ Antivirus ဆိုလို့ပြောရအုံးမယ်ခင်ဗျ။ သူ့ကို ညီ စစ်ကြည့်တာတော့ ဘယ်Antivirus မှမိမိဘူး Avast ကတော့သိတယ် မသတ်နိုင်ဘူး။ သူကဗိုင်းရစ်တော့ ဗိုင်းရစ်ဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဗိုင်းရစ်လုပ်ဆောင်ချက်မှန်းမသိအောင် Antivirus တွေကိုရှောင်ရေးထားတာဗျ။ သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ကြာလာရင်ကွန်ပြူတာဟာ တဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ် Network traffic ဖြစ်တယ်ဗျ။ နက်၀ပ်ကြိုးလေးဖြုတ်ပြီးမှ လုပ်နော်။ အဆင်ပြေပါစေ။
ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်းဗျ windows version အစစ်သုံးပြီးတော့ nod32 သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့
log files ထဲမှာရောဗျာ ဘာမှကို တွေ ့ဖူးလား နောက် quarantine မှာရောမတွေ ့ဖူးလားဗျာ
အဲ့တာလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်ပါဦး တွေ ့ရင်တော့ delete ကျွေးလိုက်ပါ
ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ကိုညမီးအိမ်.. ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်..ပြီးတော့ အဆင်ပြေ မပြေပြန်
ကိုအာလေးရေမပြောချင်ပါဘူးဗျာ......ကျွန်တော် nod32 ကိုကြိုက်တယ်ဗျ...manual update လုပ်ရတာလည်းလွယ်လို့...ကိုအာလေးတင်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစာပြီး ဒေါင်းတာဗျာ..မရဘူးဖြစ်နေတယ်...အခုလောလောဆယ်တော့ kaspersky နဲ့ရှင်းလိုက်တာတော့တွေ့တယ်ဗျ...ပြီးရင်တော့ nod ပဲပြန်သုံးချင်တယ်...ကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်ပြီး...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မိတ္တူဆိုင်ကိုသွားသွား UPDATE လုပ်ပေးနေကျဗျ...:D့ကျွန်တော်မရှိတုန်းသူလာပြီး UPDATE ယူသွားတာ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိပါဘူးကျွန်တော့်ဆီ VIRUS ကျန်ခဲ့တော့တာပဲဗျာ:14:...ကျွန်တော် NOD နဲ့ရှာတာတော်တော်နှံ့နေပြီအတွေ့ဘူးဗျ...ကျွန်တော်မလုပ်တတ်တာလည်းဖြစ်မှာပါ...ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ...:D
ညီလည်းကြုံဖူးတော့ ပြောပြမယ်နော်။ စတစ်ကို format ရိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်ရင်ရှိနေတာ တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ စတစ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာကို အဲ့ဒီ ဗိုင်းရစ်က၀င်သွားပါဘီ။ ။
ညီလေးကျးဇူး:6:ကိုပြန်စမ်းလိုက်အုံးမယ်...recycler က c ,ရောdရောမှာတွေ့တယ်ဗျ...အခြားကွန်ပျူတာတွေမှာလဲတွေ့တယ်...ညီလေးပြောသလိုစမ်းလိုက်အုံးမယ်...
memory stick ထဲမှာ autorun.inf ဖိုင်လေးကိုကြိုတင်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့်
double click ဖြင့် memory stick ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တူဗိုင်းရပ်စ်မ၀င်တော့ပါဘူး။ folder options မှာ show hidden file ကိုအမှတ်ခြစ် ပြီးရင်
hide protected operating system files ကိုအမှတ်ဖြုတ်ထားခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲမြင်ရတော့မှာပါ။ ဒါဆိုအလွယ်တကူ delete ကြွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
autorun.inf ဖိုင်ကို တည်ဆောက်ရာမှာ cmd မှဆောက်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တူဖျက်လို့လည်းမရ overwrite လည်းလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
cmd မှ autorun.inf တည်ဆောက်ပုံကတော့ ဒီဖိုရမ်ရဲ့တစ်နေရာမှာပါပြီးသားပါ မသိသူများအတွက် တော့
run> cmd ထဲ၀င်
cmd မှာ md \_\_.\_\_(memory stick drive name):\_autorun.inf\_con ဆိုပြီးဆောက်ထားရင်ရပါတယ်။ပြန်ဖျက်ခြင်ရင်တော့ remove directory command
rd \_\_.\_\_(memory stick drive name):\_autorun.inf\_con နဲ့ပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖူးတယ် RECYLER ဖိုဒါကိုဖျက်တယ်။ ပထမဆုံးဖျက်လို့မရဘူးဗျ။ Access Denied ဆိုပြီးပြတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ unlocker software လေးနဲ့ဖျက်လိုက်တယ်။ အပေါ်ကပြောသွားသလိုဘဲဗျ။ သူက Windows မှာ အစကတည်းက RECYLER ဖိုဒါနဲ့ System Volume Information ဖိုဒါတွေပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် partation တိုင်းမှာမပါဘူးဗျ။ ဥပမာဗျာ။ သာမန် RECYLER ဖိုဒါနဲ့ System Volume Information ဖိုဒါ ဆိုတာ ၀င်းဒိုးတင်တဲ့ Partation မှာသာရှိရမှာပါ။ အခုဖြစ်နေတာက ရှိသမျှ Partation
တိုင်းမှာ C:,D:,E: အပြင် memory စတစ်ထိုးလိုက်ရင် memory စတစ်မှာပါ RECYLER ဖိုဒါနဲ့ System Volume Information ဖိုဒါတွေ ကူး ကုန်တာဗျ။ ဒီတော့ဒါက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတိအကျမသိပေမယ့် အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကွန်ပြူတာဟာတဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ် Network error ဖြစ်လာတာဘဲ။ ဒါကို ဖြေရှင်းချင်ရင်တော့ my computer ကိုဖွင့်ပါ။ Tools>>Folder Options>> Show hidden files and folders ကိုအမှန်ချစ်လေးပေးပါ။ ပြီးရင် RECYCLER Folder လေးကိုဖျက်လိုက်ရင် Access denied ပြလိမ့်မယ်ဗျ။ အဲ့ဂလိုချိုရင် unlocker software လေးနဲ့ဖျက်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် နက်၀ပ်ကြိုးဖြုတ်ထားဖို့လိုမယ်နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက နက်၀ပ်ချိတ်ထားရင် ကွန်ပြူတာအကုန်လုံးကို ကူးစက်စေတယ်လေ။ ဒီတော့ နက်၀ပ်ကြိုးဖြုတ်ပြီး အလုံးတိုင်း လိုက်ဖျက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်လုံးကျန်ခဲ့တာနဲ့အလုံးတိုင်းပြန်ကူးမှာဘဲဗျ။:)):)):)):)):))
အပေါ်ကပြောသွားသလိုဘဲဗျ။ သူက Windows မှာ အစကတည်းက RECYLER ဖိုဒါနဲ့ System Volume Information ဖိုဒါတွေပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် partation တိုင်းမှာမပါဘူးဗျ။ ဥပမာဗျာ။ သာမန် RECYLER ဖိုဒါနဲ့ System Volume Information ဖိုဒါ ဆိုတာ ၀င်းဒိုးတင်တဲ့ Partation မှာသာရှိရမှာပါ။ အခုဖြစ်နေတာက ရှိသမျှ Partation
တိုင်းမှာ C:,D:,E: အပြင် memory စတစ်ထိုးလိုက်ရင် memory စတစ်မှာပါ RECYLER ဖိုဒါနဲ့ System Volume Information ဖိုဒါတွေ ကူး ကုန်တာဗျ။ ဒီတော့ဒါက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။
system volume information ဖိုဒါဆိုတာက restore file တွေသိမ်းတဲ့နေရာဗျ format ချပြီးတဲ့ HD partition တိုင်းမှာပါတယ်ဗျ။ recycler ဆိုတာကလည်း delete လုပ်ထားတာတွေကို ယာယီသိမ်းထားတာတွေ့တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့်လည်း virus ရေးတဲ့သူက အဲဒီ recycler folder name ကိုပဲဆက်ယူသွားဟန်ရှိတယ်ဗျ။ kaspersky နဲ့စစ်လိုက်ရင် recycler folder ထဲမှာရှိတဲ့ virus ကိုတော့သတ်တယ်ဗျ။ folder ကိုတော့ မဖျက်သွားပါဘူးဒါကြောင့်အထင်မှားတာပါ။ သူ့ကိုဗိုင်းရပ်စ်မရှိရင်တော့ အသာလေး delete ကျွေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။ recycler folder ဟာဖျက်ပြီးပြန်ပွားနေပြီဆိုရင်တော့ full scan သာစစ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ restore point တစ်နေရာရာမှကပ်နေတဲ့ trojan ကိုတန်းမိမှာပါပဲ။
နောက်တစ်ခါ network ပြန်ချိန်ရင်ရော...RECYCLER folder က ပြန်ရောက်လာမှာလားဗျာ...
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော့်ရဲ့ External HDD ထဲမှာ က #RECYCLE.BIN ဆိုပြီး ဖိုင်တစ်ခု ရှိသေးတယ်ဗျ..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...ဟို System Volume Information ဆိုတဲ့ဖိုင်ကရောဗျာ...သူ့ကို ကလစ်ခေါက်လိုက်တာနဲ့...သူ့ နဲ့ဘာတော်သလဲတော့မသိဘူးဗျာ...RECYCLER Folder က ပြန်လည်ကြွလာတော်မူပါတယ်။
ဘယ်လိုများလုပ်ရပါ့မလဲ..အဲဒီဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုရှင်းထုပ်ရမလဲ...မျက်စေ့ကိုနောက်နေတယ်.... ဘယ်သူများတတ်နိုင်ကြသလဲဗျာ...ညီတော၊်နောင်တော်များ ကူညီကြပါ။
ကျနော်ကတော့ အရင်ဆုံး ESET နဲ့ စစ်တယ်ဗျ ပြီးတော့ msconfig ထဲ မှာ ကြည့်တယ်။ !!!.exe ရှိတဲ့ စာကြောင်းဘေးက command အောက်မှာ ကြည့်တယ် သူကc:\_windows\_system32\_ .......အောက်မှာ ဂဏန်းရယ်
စာရယ်ရောပြီးပြထားတယ် အဲဒါကသူ့ရဲ့ folder ပဲ hidden အနေနဲ့ပေါ်နေမယ်ဆိုတော့ hidden files ကိုတော့ဖော်ပေးထားမှရမယ် ဒါကိုကျနော်က ၀င်ပြီး shift+del နဲ့ကိုင်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ regedit ထဲမှာ HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_MICROSOFT\_shared tools\_Msconfig\_startupfolder\_ အောက်ကဟာရယ်
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_MICROSOFT\_shared tools\_Msconfig\_startupreg\_ အောက်က သူနဲ့ဆိုင်မဲ့ဟာတွေ delete လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ restart ချပြီးပြန်တက်လာတော့
memory stick ထဲမှ Recycled ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခုရှိနေတယ် ဖျက်လို့လည်းမရဘူး.... ဘယ်လိုဖျက်ရမလည်းပြောပြပေးကြပါ
unlocker ချိုတဲ့ ချော့၀ဲနဲ့ဖျက်လေဂျာ....
recycled.exe ဆို ချက်ချင်းဖြုတ်လို့ရဘူးဗျ firewall ကောင်းတဲ့ (flashy နိုင်တဲ့) antivirus နဲ့မရတယ်ဗျ
hidden files ဖော်ပြီး recycled ကိုတွေ့ရင်ဖယ်ချနိုင်ဂြေင်းဘာဗျာ